Akụkọ - Mevos International Congress of Aesthetic Surgery and Medicine 2020 Summer
MEVOS International Congress of Aesthetic Surgery and Medicine, Na-achịkọta ndị isi ụwa niile na ụlọ ọrụ ịwa ahụ rọba, Na-akparịta nkà na ụzụ mba ụwa na ọganihu na sayensị mmụta sayensị, na-amụ usoro echiche nke ndị isi ikike na ndị dọkịta na-eme nke ọma, Ịgbasa echiche dị elu nke njikwa ụwa na Ịntanetị. ọhụrụ, Comprehensive mkpuchi nke ukara industries, mahadum na nnyocha institutes, A China ọgwụ cosmetology ụlọ ọrụ na-ejikọta agụmakwụkwọ, nka, nka, njikwa, ejiji na omenala.
Nzukọ a na-agba mbọ ime nyocha na ịchọpụta ọdịdị mmepe nke ngwaahịa cosmetology zuru ụwa ọnụ, teknụzụ, ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ, ịkọ amụma na wepụta usoro mmepe n'ọdịnihu. N'otu aka ahụ, ọ na-egosiputa echiche agụmakwụkwọ mba ụwa na teknụzụ kachasị ọhụrụ nke ịwa ahụ plastik, ọrịa akpụkpọ anụ na ihe ịchọ mma dermatology, laser cosmetology, injection cosmetic, cosmetology nke Chinese ọdịnala, ọgwụ mgbochi ịka nká na isiokwu ndị ọzọ a ma ama; N'aka nke ọzọ, ọ na-atụle kpọmkwem ihe bara uru usoro maka nwayọọ nwayọọ integrating aesthetic ịwa ahụ na ọgwụ alaka, n'ihi na emelite minimally invasive na noninvasive ọgwụgwọ pụtara n'okpuru nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọganihu nke ọhụrụ ihe, ọhụrụ ngwá, ọhụrụ ọgwụ na ọhụrụ usoro.
N'ihe ngosi a, ngwaahịa ọhụrụ ----ISEMECO 3D Smart Skin Analysis Device a ga-egosipụta na nke mbụ.
Sistemụ nyocha akpụkpọ anụ MC88: 5 Spectra, ụdị onyonyo ọgụgụ isi 15, afọ 5 ~ 7 amụma amụma akpụkpọ ahụ. A na-achịkọta data ahụ wee jiri ihe oyiyi tụnyere nchekwa data nke ndị otu afọ na profaịlụ. A na-atụnyere akpụkpọ ahụ onye ọrịa gị ozugbo na ndị nọ na nchekwa data wee gosipụta nsonaazụ dabere na kaadị akara. Ngwaahịa mma akwadoro ma tinye atụmatụ ọgwụgwọ anụ ahụ. Onye enyemaka ahịa kacha mma maka ụlọ ọgwụ mara mma.
A na-ejikarị ISEMECO na Ngalaba Ọkachamara Ọkachamara nke ụlọ ọgwụ, ụlọ ọrụ ịwa ahụ plastik na ụlọ nyocha sayensị.
Uru siri ike:
* HD ngosi + PC kọmputa
* Algorithm Cloud Skin
* Nyocha data anya
* Nkwanye ngwaahịa emetụtara
*Ajụjụ mkpesa ngwaahịa dị n'ịntanetị
* Njikwa ozi ndị ahịa
* Nchekwa igwe ojii na-akparaghị ókè
* UI dị elu na-emekọ ihe
* Ndị otu anyị na-anabata ngwa ngwa n'ahịa & ngwa ngwa ngwa ngwa
* Sistemụ nhọrọ 10, kwụsiri ike
Oge: Ọgọst 13 ruo Septemba 15, 2020.
Ụlọ ntu: 138A
Oge nzipu: Sep-24-2020